यी अवस्थामा मेथीदाना हुनसक्छ खतरनाक! जान्नुहोस् ५ नोक्सान – Etajakhabar
यी अवस्थामा मेथीदाना हुनसक्छ खतरनाक! जान्नुहोस् ५ नोक्सान
ताजा खबर :-मेथीदानाको प्रयोग स्वादको लागी मात्र नभई कयौँ मानिसहरूले स्वास्थ्य लाभको लागि यसलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्छन् । यदि तपाई पनि मेथीदानाको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यसबाट हुने नोक्सान पनि अवश्य जान्नुहोस् ।
१-हरेक मानिसका लागि मेथीदानाको सेवन फाइदाजनक नै हुन्छ भन्न सकिदैन तर केही मानिसको लागि निकै नोक्सानदायक पनि हुनसक्छ । विशेषगरी जुन मानिस ब्लडशुगर वा डायबिटीजको रोगी हुन्छन्, उनीहरूले यसको सेवन सावधानीपूर्वक गर्नुपर्दछ किनभने यसले शुगरको स्तरलाई प्रभावित गर्छ ।
२-कयौँ पटक यसलाई खाँदा पेट सम्बन्धि समस्या पनि हुनसक्छ, जस्तै:- ग्यास्ट्रिक हुनु, खट्टो डकार आउनु आदि । यसबाट बँच्नको लागि यसको मात्रामा विशेष ध्यान राख्नुहोस् र यदि यसको सेवनले तपाईलाई असहज महसूस हुन्छ भने सेवन गर्नुहुँदैन ।
३-कयौँ पटक मेथीदाना खाँदा त्वचा सम्बन्धी समस्या पनि हुनसक्छ । त्वचामा सूजन वा दुखाई जस्ता समस्या पनि यसको सेवन गर्दा हुनसक्छ ।
४-यो गरम प्रकृतीको हुन्छ । यसले मूत्र सम्बन्धि समस्याहरू पनि उत्पन्न गर्न सक्छ । मूत्रमा अनौठो गन्ध आउने वा अन्य समस्याबाट बँच्नको लागि यसको प्रयोग सोच-विचार गरेर मात्र गर्नुहोस् ।
५-गर्भवती महिला वा नवजात बच्चाको आमाले यसको सेवन सावधानीपूर्वक गर्नुपर्दछ । यसले डायरियाको समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष २७, २०७४ समय: २२:२९:२०